That's so good, right?: July 2017
အကြောင်းမဲ့ဝှေးစေ့နာကျင်ခြင်းဟာ ရောဂါအမည်တပ်ဖို့ရာအလွန်ခက်ခဲပြီး နာကျင်ခြင်းဟာဆက်တိုက်ဖြစ်နေနိုင်သလို၊ သက်သာသွားလိုက်နာလိုက်လည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုသမှုမခံယူမီ အခြားအကြောင်းအရင်းများကိုလည်း ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကျောက်ကပ်တွင် ကျောက်တည်ခြင်း၊ တင်ပဆုံ (သို့) ကျောရိုးမအတွင်းရှိ အာရုံကြောမကြီးမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေဟာလည်း အဲဒီနေရာနားတဝိုက်မှာပဲ နာကျင်စေနိုင်ပါတယ်။
1. လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သောရောဂါများကြောင့် ရောင်ရမ်းခြင်း (သို့) ပိုးဝင်ခြင်း
3. ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် နာကျင်ခြင်း
ပထမဆုံးကုထုံးအနေနဲ့ ဝှေးစေ့နာကျင်ပါက အပြည့်အ၀အနားယူသင့်ပြီး ရောင်ရမ်းမှုကိုသက်သာစေနိုင်တဲ့ဆေးများ (ဥပမာ - ibuprofen) တို့ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သောက်သင့်ပါတယ်။
အကယ်၍နာကျင်ခြင်းဟာ တင်ပဆုံကြမ်းခင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေပါက လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ရောဂါပိုးရှိ/မရှိကို စစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်လျှင် ပိုးသတ်ဆေးများပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းမဲ့ဝှေးစေ့နာကျင်ခြင်းဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ရန်မှာ ကပ်ပယ်အိတ်တွင်နာကျင်ခြင်းကို သုံးလထက်ပို၍အဆက်မပြတ် ခံစားနေရပြီး နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုပါ ထိခိုက်လာသောအခြေအနေကိုဆိုလိုပါတယ်။
ရောဂါရှာဖွေရန် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု (ဆီးနမူနာ၌ ပိုးမွေးခြင်း၊ တစ်ကိုယ်လုံးကိုစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ဝှေးစေ့ကိုတယ်လီဗီးရှင်းဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း) များပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး အခြားအကြောင်းအရင်းများကြောင့် နာကျင်ခြင်း (ဥပမာ - ဝှေးစေ့ကင်ဆာ) ဟုတ်/မဟုတ်ကို စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ကုသမှုကိုမပြုလုပ်မီ အကြောင်းအရင်းမရှိဘဲ ဝှေးစေ့နာကျင်ခြင်းဟုတ်/မဟုတ် တိတိကျကျပြောနိုင်တဲ့ စစ်ဆေးမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်လည်း ဆရာဝန်မှအကြံပေးပါလိမ့်မယ်။ အကြောထဲသို့ ထုံဆေးထိုးလိုက်ပါက နာကျင်ခြင်းသက်သာသွားသည်ဆိုပါက အကြောထဲမှာရှိတဲ့ အာရုံကြောများကြောင့်ဟုသိနိုင်ပြီး ရေရှည်အဆင်ပြေနိုင်ရန် ခွဲစိတ်ကုသမှုကိုခံယူသင့်ပါတယ်။
Dr.Shoskes က ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ အာရုံကြောမျှင်တွေက မှန်ကန်တဲ့အချက်ပေးစနစ်ကိုပေးပို့သလို မှားယွင်းတဲ့အချက်ပေးစနစ်တွေကိုလည်း ပေးပို့နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အကြောကိုထုံစေပေမယ့်လည်း နာကျင်ခြင်းဝေဒနာက မသက်သာဘူးဆိုလျှင်တော့ နာကျင်ခြင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ထံသို့ သွားရောက်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အကြောထဲမှာရှိတဲ့ အာရုံကြောမျှင်များဖြတ်တောက်ခြင်းကို မည်သို့ပြုလုပ်ပါသနည်း
အသေးစားခွဲစိတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဝှေးစေ့အထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကိုဓားမြင့်အနည်းငယ်ခွဲ၍ အကြောကိုမြင်ရအောင် ပြုလုပ်ပြီးအာရုံကြောမျှင်များကို ဖြတ်တောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သွေးကြော၊ ပြန်ရည်ကြောများမထိခိုက်စေရန် ဂရုပြုရပါမယ်။
Dr.Shoskes ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ ၎င်းခွဲစိတ်မှုမှာ 45-90 မိနစ်ထက်ကြာမြင့်တတ်ပြီး အောင်မြင်မှုရာခိုင်နှုန်းမှာ 65-80 ထိရှိသည့်အပြင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းမရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ သို့ရာတွင် အခြားခွဲစိတ်မှုများကဲ့သို့ပင် ဝှေးစေ့ထိခိုက်ခြင်းနှင့် ဝှေးစေ့ပတ်လည်တွင် ရေများစုပုံလာခြင်း စတဲ့အန္တရာယ်တွေကတော့ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
ဆက်လက်၍ ပြောကြားရာမှာတော့ အာရုံကြောမျှင်တွေဟာ အလွန်သေးငယ်တာကြောင့် အရေးကြီးအစိတ်အပိုင်းတွေကလွဲလို့ ကျန်တဲ့အာရုံကြောအားလုံးကိုဖြတ်တောက်ပစ်ဖို့လိုပါတယ်ဟု သိရပါတယ်။ အကယ်၍ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးသည့်တိုင် နာကျင်ခြင်းကိုဆက်လက်ခံစားနေရပါက နာကျင်ခြင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကိုခံယူသင့်ပါတယ်။
Dr. Moe Thauk Pan
Posted by Alex Aung at 9:32 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 12:46 PM No comments:
ဆောင်းတွင်း တစ်ရက်ရဲ့ နံနက်ခင်းတစ်ခုမှာ ကျွန်တော် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်စရာ အိပ်မက်မှနိုးထလာပါတယ်။ ရင်တွေ တဆတ်ဆတ်ခုန်ရင်း အသက်မှန်အောင် ရှူရှိုက်ရင်း ထထိုင်ကာ ရေတစ်ခွက်ကို သောက်လိုက်ရတာပေါ့။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပေမဲ့ ကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိရတာ က ကျွန်တော့် အမျိုးသား သဘာဝပစ္စည်းဟာ အလွန်ကြီးမားသော အရွယ်အစားတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲနေတာကိုလေ။ အိပ်ယာပေါ် ပက်လက်လှဲနေရာကနေ ဦးခေါင်းကိုအသာမပြီး ပေါင်ခြံစီကြည့်လိုက်တော့ အညိုရောင်ကုန်းထနေသော တောင့်တင်းနေတဲ့ -ီးကြီးဟာ လေး(မြှား)ရဲ့ အခုံးကြီးတစ်ခုလိုပဲ ခုန်းထနေရဲ့။ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေဟာ ပေါင်ခြံအတွင်း တနေရာရာမှာ မြင်ကွင်းက ပျောက်နေတယ်။
'ကျွန်တော် ဘာတွေများ ဖြစ်နေလဲ?' တွေးမိရပါတယ်။ ဒါ အိပ်မက်တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ အခန်း...ကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းဟာ သာမန် အခန်း တစ်ခုပါ။ နံရံလေးဘက်နှင့် ကာရံထားတဲ့ သေးငယ်သောနေရာလေး။ စားပွဲပေါ်မှာတော့ Lube ဘူးတစ်ခုက အဖုံးပွင့်လျက်၊ condom များနှင့် သေးငယ်သော အရုပ်လေးများပြန့်ကျဲနေတယ်။ နံရံပေါ်မှာတော့ မနေ့က print out လုပ်ခဲ့သောပုံကို ချိတ်ဆွဲထား ရက်သား။ သားမွှေး ဦးထုပ်ဆောင်းထားတဲ့ လက်ဖျံလောက်တုတ်တဲ့ ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားသော ငပဲကို မိုးပေါ်မတ်နေအောင် ထိန်း ကိုင်ထားရင်း မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ပုံလေ။
ခဏနေတော့ မွေ့ယာပေါ် အသာလှဲရင်း စာဖတ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်နားကို အောင်ဇော်ကပ်လာတယ်။ ဘေးမှာ သူ အသာဝင်လှဲရင်း ည အိပ်ဘောင်းဘီပါးကြောင်း ပေါင်ကြားက ခုံးထနေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို လက်နှင့် အသာပွတ်သပ်ရင်း ကိုင်တွယ်ပါရော။ သူ့မျက်လုံးတွေ ဟာ တဖြည်းဖြည်းတောက်ပလာသလို အရောင်တစ်မျိုးစွန်းလာရဲ့။ နေ့လည်က ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပြီးခဲ့တာကြောင့် သိပ်မမာသေးတာတောင် ညီဘွားက အတော်ထွားနေတာ အခု သွားစနေပြန်ပြီလေ။ အား....လက်ဖ၀ါးရဲ့ နုညံ့မှုကြောင့်ရော ဘောင်းဘီစရဲ့ ပွတ်သပ်မှုကြောင့်ပါ ကျွန်တော့်ပစ္စည်း တဖြည်းဖြည်းခေါင်းထောင်ထလာတာ ဘောင်းဘီပေါက်ထွက်မတတ်ပါပဲ။ ဘောင်းဘီကို တဖြည်းဖြည်းလျှောချွတ် ပေါ် လာတဲ့ ငပဲကြီးကို သူ အားရပါးရကိုင်ကာ နှုတ်ခမ်းလွှာတွေထဲ သွင်းလိုက်ပါတော့တယ်။
အသက်အရွယ်စုံလူတွေလာလို့ရတဲ့ နာမည်ကြီး gay sauna တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့သွားကြတာပါ။ မ၀င်မီ စားသောက်ဆိုင်စီ ဦးဆုံး ၀င်ကြတာပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ခါတိုင်းလို စတိုင်လ်ထွားပဲများမနေမိဘဲ အောင်ဇော်နောက်က တိတ်တဆိတ်သာလိုက်သွားဖြစ်ပါ တယ်။ အလင်းရောင် သိပ်မကွဲတဲ့ ရေနွေးငွေ့တွေထောင်းထောင်းထနေတဲ့ အခန်းထဲ။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မြင်ဖို့ဆို အလင်း ရောင်က နည်းပေမဲ့ အထိအတွေ့နဲ့တော့လှုပ်ရှားလို့ရပါတယ်။ ခါးမှာပတ်ထားတဲ့ တဘက်ကို ပခုံးပေါ်တင်ပြီး ဟိုစုစု ဒီစုစုလူတွေကြား ထဲ တိုးဝင် ကာ ချောင်ကျကျဘက် တိုးဝင်ခဲ့ပါရဲ့။ ဒီနေရာမှာ လူတွေက လက်တွေနှင့် နေရာအနှံ့ကိုင်တွယ်ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မသိမသာ နံရံအနားမှာ မှီရပ်ရင်း တစ်ယောက်ယောက်လာစမ်းတာကို ခွင့်ပြုဖို့စောင့်နေဖြစ်ပါရော။ ကျွန်တော့်စီကို ဦးတည်ပြီးလာနေတဲ့ လူတစ်ယောက်နားသွားလိုက်တော့ အဲဒီလူက ပျော့နေဆဲ ကျွန်တော့်ငပဲကို ကိုင်ကာ အသက်ရှူမှားရင်း 'ဘာကြီး ပါလိမ့်?' လို့ပြောဆိုသံကြားရပါတယ်။ လူအတော်များများလာကိုင်တာကို ခွင့်ပြုပြီးမှ နောက်ဆုံး စိတ်ပျက်လာကာ ရေနွေးစိမ်ကန်ကြီး ဘက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
ငနဲကြီးတစ်ပွေ ကုန်းကုန်းကွကွနဲ့ ခံနေပုံများ အားရစရာကောင်းသေး။ နောက်က ပို့နေတဲ့ ကောင်လေးကလည်း နွားသိုးကြိုးပြတ်သည့် အလားပါ။ ရှေ့က ငနဲကြီးရဲ့တင်ပါးကိုဖြဲ သူ့ငပဲကိုနှဲ့ပြီးသွင်းကာ အထုတ်အသွင်းလုပ်နေတာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတောင် ဂရုမစိုက်တော့ဘူး လေ။ Oh My God! သောက်ရမ်းသန်တဲ့ ကောင်လေးပါလား ရှေ့ကငနဲကြီးခမျာ ပါးစပ်ကိုဟပြီး အသံတောင်သိပ်မထွက်နိုင်ဘူး။ ကြည့် ရင်း. ....ကြည့်ရင်း ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် climax ဖြစ်ချင်လာသလို ငပဲထဲကအကြောတွေ တဆတ်ဆတ်ခုန်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် အောင်ဇော် ကို လိုက်ရှာဦးမှပါဆိုပြီး အပြင်ခန်းတွေစီ လျှောက်လာတော့ အလွန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ငနဲလေးနှင့် ဇာတ်ရှိန်မြင့်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါ တယ်။ အဲဒီကောင်လေးလည်း အောင်ဇော့် တင်ပါးအိအိတွေထဲ ညီဘွားခပ်တုတ်တုတ်ကို အထုတ်အသွင်းခပ်သွက်သွက် လုပ်နေတာများ အောင်ဇော့်မျက်နှာက ပြုံးနေသလားမသိ။ ၁၀မိနစ်လောက်ကြာတော့ ခပ်အုပ်အုပ်အော်ညည်းသံနှင့်အတူ အောင်ဇော် တို့နှစ်ယောက် ဆန့်ငင်ဆန့်ငှင်ဖြစ်သွားကြတာ မြင်လိုက်ရပါတယ်။
'ဒေါက်..ဒေါက်' အခန်းထဲ ဘယ်သူလမ်းလျှောက်နေတာလဲ ပြတင်းတွေရော အခန်းတံခါးတွေကော သေချာသော့ခတ်ထားတာပဲဟာ။ ကျွန်တော့်မျက်ခွံတွေကလေးနေလိုက်တာ အိပ်ချင်စိတ်က ပိုကဲနေတာကြောင့်။ ခြေသံက ကျွန်တော်ရှိရာကိုလာနေတာပဲဗျ။ နံဘေးဘီရို ပုပေါ်က မီးခလုပ်ကို လက်နှင့်အသာစမ်းပြီးဖွင့် လူလည်း ရုတ်တရက်ထရပ်လိုက်တာ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေ ပြူးကျယ်သွားရပါရော။ နံရံ ပေါ်ကပ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံထဲက မော်လ်ဒယ်အရှင်လတ်လတ် ကျွန်တော့်ရှေ့မှောက်ရောက်နေတာဗျ။ သူ့မျက်နှာက ကျွန်တော့်ကိုတပ် မက်တဲ့ အကြည့်တွေနှင့် မြှူဆွယ်နေပြီ။ ခပ်လျော့လျော့အိပ်ယာပေါ်လှဲနေတဲ့ ကျွန်တော့်စီ သူတွားပြီးတက်လာတယ်။ ရင်တွေအရမ်းခုန် လာတယ် ခပ်ဖွဖွ ကျွန်တော့်ခြေဖျားတွေကနေတစ်ဆင့် ပေါင်ခြံဆီအနမ်းပေးနေတာ။ သွေးကြောတွေထဲက တဆတ်ဆတ်တုန်လာတဲ့ အထိ သူဘယ်လိုများ ခံစားစေပါလိမ့်။ ကျွန်တော့်ညီဘွားဟာ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ထွားကြိုင်းမတ်ထောင်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရွှေဥ တွေကို တစ်လုံးခြင်းငုံစုပ်တယ်၊ ပြီးတော့ ခပ်ထွားထွား ညီဘွားကို သူ့အာခံတွင်းထဲအရောက်သွင်းပါရဲ့။ ကွမ်းသီးခေါင်းကို လျှာနှင့် ဝေ့ ၀ိုက်လိုက် ငပဲတစ်ခုလုံး သူ့လည်မျိုထဲထိ နှဲ့သွင်းလိုက် ဖီလင်အတော် good တယ်။ လက်တစ်ဖက်ကလည်း ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို ဆက်လက် ပွတ်သပ်သေးတာ။ 'အိုး....အာ...ရှီး 'တစ်နေကုန် စုထားသမျှ အခုသူ့လက်ထဲမှာ အဆုံးသတ်တော့မယ်။ လည်မျိုထဲထိ ငပဲ ကိုသွင်းသွင်း ပြီး ကစားပေးတာလေဗျ။ 'မင်းဆီငှားထားတဲ့ဟာ ငါပြန်ယူတော့မယ်' ဘာပြောတာလဲ? '..အ....အား...အ' သူ့ပါးစပ်ထဲကို ရေပိုက်နှင့်ပန်း သည့်အလား သုတ်ရည်တွေကို အားရပါးရသွင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါကို သူမကျေနပ်နိုင်သေးပဲ ဆက်ပြီးစုပ်မျိုနေသေးတာ။ နည်းနည်းအချိန် ပိုကြာလာသလားဆိုပြီး ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ သူ ကျွန်တော့်ငပဲကို သွားထက်ထက်တွေနှင့် ကိုက် 'အား....!!!'
Posted by Alex Aung at 6:26 PM No comments:
Penis Injection Risks - ကျားအင်္ဂါဆေးထိုးတဲ့ အန္တရာယ်တွေ
ယောက်ျားလေးတွေသဘာဝအရ မိမိမွေးရာပါလိင်အင်္ဂါရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အရည်အသွေးထပ်တူသဘောမျိုး စဉ်းစားလက်ခံတတ်ကြတာများပါတယ်။ ထွားကြိုင်းမှသန်မာမယ် လိင်ကိစ္စမှာအကျိုးပိုထူးမယ်လို့မှတ်ယူတတ်ကြတာကိုးနော်။ ကျွန်တော် ဆီးလမ်းကြောင်းနှင့်ကျောက်ကပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ ဆန်းစစ်ချက် လေ့လာချက်ဆောင်းပါးတွေကိုလည်း ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ် ဆက်စပ်မိရင် စကားပြောမေးမြန်းကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ တိုးတက်ပါပြီဆိုတဲ့ အမေရိကက ဆရာဝန်ကြီးများရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကို ဖတ်ရှုမိရပြန်တော့ အွန်လိုင်းကနေကြေငြာတဲ့ အမျိုးသားများစိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ကိရိယာတွေ သောက်ဆေး လိမ်းဆေးတွေကို တကယ်အာမခံချက်ရှိလားလေ့လာကြည့်ပြန်တော့ ညာတာကခပ်များများပါ။ ဆေးထိုးဖို့မလိုသူကို မိုးရေထိုးပေးပြီး နှစ်သိမ့်ရသလိုမျိုးဆေးတွေများပါတယ်။ ဒီကိစ္စကလည်း စီးပွားရှာလို့ကောင်းတဲ့အနေအထားဆိုတော့ အမျိုးသားများစီက အလုံးအရင်း ရတဲ့ငွေကြေးတွေက မက်စရာကိုးနော်။
ထုကြီးလာအောင်သောက်တဲ့ဆေးတို့၊ရှည်လာအောင်လေ့ကျင့်တဲ့ကိရိယာတွေပြောင်းတွေ အို…အများကြီးပဲရောင်းကောင်းလိုက်တာ များမှများ။ ထိုးဆေးတဲ့ အံကိုက်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေရှိသူများကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြပြီးကြေငြာတာလား နဂိုထွားကိုယ်တော်တွေပုံကိုရိုက်ပြီး ပိုက်ပိုက်ပေးပြီး ညာခိုင်းကြေငြာတာလား မစဉ်းစားနိုင်ကြပြီ။ အပြာကားတွေထဲကမင်းသားတွေဆိုတာ သေချာလူရွေးချယ်ပြီးရိုက်ကူး ထားကြတာပါ။ အဆမတန် ဖောင်းကားလာလို့ မရပ်တန့်တော့လို့ ဆီးသွားမရတော့လို့ အလိုလေး အဘလေးအော်နေရသူများရဲ့ ဓာတ်ပုံများကြတော့ မဖော်ပြပါလား။
အခု ခါတိုင်းလိုပါပဲ ကျန်းမာရေးအမေးအဖြေတွေကို ကူးယူနေကြ အမေရိကရောက် ဆရာကြီးဒေါက်တာတင့်ဆွေရဲ့ Facebook ပေ့ခ်ျကနေ “ကျားအင်္ဂါဆေးထိုးတဲ့အန္တရာယ်တွေ” အမေးအဖြေလေးကို ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဆေးထိုးသမားလုပ်ဖို့ စဉ်းစားနေသူများဖတ်ကြည့်ဆင်ခြင်ပေါ့နော်။
ကျားလိင်အင်္ဂါကို ဆေးထိုးကြပြီး ဒုက္ခရောက်ကြလို့ မေးလာသူတွေမနည်းပါ။ အများဖတ်အောင်တင်သင့် မတင်သင့် စဉ်းစားနေခဲ့တာ နှစ်တွေကြာပါပြီ။ အပြစ်တင်ချင်သူတွေက ကျွန်တော့်ကိုသာတင်ကြပြီး၊ အကျိုးဖြစ်နိုင်သူတွေကများမှာမို့ အရင်ရေးထားတာကို (အများကြီးမွမ်းမံပြီး) တင်ပါရစေ။ ပို့လာတဲ့ဓါတ်ပုံတွေတော့ မတင်တော့ပါ။
(၁) ဘယ်သူမှမပြောပဲ မိမိဘာသာလမ်းဘေးကဆိုင်တွေမှာ ကိုယ့်ဘာသာ ဆေးထိုးအပ်သွားဝယ်ပြီး၊ လမ်းဘေးဆိုင်က ငနဲတွေထိုးပေးတယ်ဆိုလို့ သွားထိုးလိုက်မိတယ်။ ကြားမိတာတော့ အဲဒီဆေးကို နည်းနည်းချင်းထိုးရတယ်လို့တော့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဆိုင်ကငနဲက ၂ ကြိမ်တောင်ထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆေးထိုးပြီးရင် လိမ့်ချေပေးရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီလိုမချေပေးရင် ဆေးတွေဟာ တစ်နေရာထဲကို ခဲသွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ လှိမ့်ပြီး ချေနေပါတယ်။ ချေပေးတဲ့အခါ လိုအပ်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆေးထိုးလည်း များသွားပုံရတယ်။ ဆေးတွေက တစ်ဖြည်းဖြည်းများသလိုပဲ ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးထက် ပိုကြီးလာပါတယ်။ ဆေးတွေက တပြင်လုံးအပြင် အရှေ့က အရည်ပြားထဲအထိ ဝင်လာပြီး ထိပ်ကိုဖွင့်လို့မရတော့ဘူး။ နောက်ဆုံး တဖြည်းဖြည်း ဆီးပေါက်တဲ့ အပေါက်ကို တော်တော်နဲ့ ဖွင့်မရတော့ဘူး ဖြစ်လာတယ်။
အဲဒါနဲ့ ကြောက်ပြီး ဆရာဝန်ဆီသွားပြ ဆေးခန်းတစ်ခုမှာ ခွဲဖို့ ပြင်လိုက်ပါတော့တယ်။ တစ်ဖြည်းဖြည်း ခဲခဲလာပါတယ်။ ဆေးတွေထုတ်တဲ့ရက်က ဆေးထိုးပြီး ၃ ရက်မြောက်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဆရာဝန်က ထုံဆေးပေးပြီး ဆေးတွေကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ တစ်ချို့တွေ ကျန်လိမ့်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ အဲဒီမှာ ခွဲစိတ်နေတုန်း ထုံဆေးကပြေချင်လာပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဆရာဝန်က အမြန်အမြန် ချုပ်လိုက်ပုံရပါတယ်။ ပုံထဲကအတိုင်းကို ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ အခု အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့ နောက်ပိုင်း အိမ်ကမသိအောင် ဆေးရုံမှာမနေပဲ ခွဲပြီးပြီးချင်း အိမ်ပဲပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ညှော်တော့ မိကောင်းမိခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်။
အခု ကျွန်တော် အိမ်ထောင်ကျသွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မိန်းမက မခံစားနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အတူနေပြီးတိုင်းဖြစ်ဖြစ် မဆက်ဆံပဲ ထားတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် တစ်ချက်တစ်ချက် ဆေးခဲနေတဲ့ နေရာတွေက ကိုက်သလိုလို နာသလိုလိုလေး ခံစားမှု အသေးလေးတွေ ခံစားလာမိပါတယ်။ အဲဒီလို ကိုက်သလိုလိုဖြစ်လာတာက ဒဏ်ရာကျက်ပြီး ၁ နှစ်ကြာပြီးမှ ခံစားလာရတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။ အဲဒါ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်သလား။ နောက်ပြီး ဆေးတွေက ဆီးဖုံးအထိကော ကပ်ပယ်အိတ် (ခေါ်) ဝှေးစေ့ အိတ်ထဲမှာပါ ပြန့်ပြီးခဲနေပါတယ်။
Picture (C) မှာ ဖော်ပြတဲ့အတိုင်း ဆေးတွေရောက်နေတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော့်မှာ ကလေးကော ရနိုင်ပါ့မလားလို့လည်း သိချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီအထဲက ဆေးခဲတွေကို ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ပြီး ဖယ်ထုတ်လို့ကော ရနိုင်ပါ့မလား။ နောက်ပြီး Picture (B) မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ပိုထွက်နေတဲ့နေရာက ကျွန်တော့်အတွက်ကော ဇနီးသည်အတွက်ပါ တအားအခက်ခဲဖြစ်နေလို့ အဲဒီနေရာကို ပလပ်စတစ် ဆာဂျရီလုပ်လို့ရနိုင်ပါ့မလား။
အဲဒီမှာ အမျှင်ကလည်း တစ်ခါတစ်လေ အတွင်းခံဝတ်တဲ့အခါ ဆွဲထားသလိုဖြစ်ပြီး နာနာနေတယ်။ အဲဒီအမျှင်လေးကို ဖြတ်ထုတ်လို့ကော ရနိုင်ပါ့မလား။ အကယ်၍ ဖြတ်ထုတ်လို့ရပါက ကလေးယူလို့ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ Picture (D) က အမျှင်ကလေးကို ပြောတာပါ။ ဘယ်ဆရာဝန်နဲ့ ဘယ်လို ပြောပြရမလဲဆိုတာရယ် သိလို့ရနိုင်မလား။ ပလပ်စတစ်ဆာဂျရီ လုပ်လို့ရနိုင်ပါမလား။ ရနိုင်တယ်ဆိုရင် ကောင်းမယ်ထင်တဲ့ဆေးရုံကို လမ်းညွှန်ပေးစေလိုပါတယ်။
လက်လှမ်းမီသလောက် မလုပ်ကြအောင် သတိပေးကြစေချင်ပါတယ်။ အရပ်နည်းတွေ၊ အွန်လိုင်းကြော်ညာတွေကို မယုံကြပါနဲ့။ လူဖြစ်ရှုံးသွားကြသူတွေ မနည်းတော့ပါ။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ အဲလိုယောက်ျားလိင်အင်္ဂါကို ဆေးထိုးလို့ ဘာတွေဖြစ်သလည်းဆိုတဲ့ သုတေသန သိပ်မတွေ့သေးပါ။ အဲလုပ်ကြတာ မြန်မာတွေမှာသာ များသလားမပြောတတ်ပါ။ မေးလာသူတွေထဲမှာ ထိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နေသူထဲကလည်းပါတယ်။
ပုံမှာ ကျားလိင်အင်္ဂါကိုဆေးထိုးနည်း ပြထားပါတယ်။ အဲတာက လိင်အင်္ဂါကြီးဆေးထိုးဘို့ မဟုတ်ပါ။ တကယ့် ပန်းသေ ပန်းညှိုးဖြစ်နေသူတွေအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးထိုးအပ်ရှောင်ရမယ့်နေရာတွေကို အကြမ်းဖျဉ်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
• ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်က အင်္ဂါကြီးအောင် ဆေးထိုးထားပါတယ်။ ဆေးထိုးပြီးစကတော့ မကြာခဏဆိုသလို ဖောင်းလာလိုက် ပြန်ကျသွားလိုက် တခါတလေ အရမ်းကြီးနာကျင်နေတာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု နောက်ပိုင်းတော့ အဲ့လိုတွေမဖြစ်တော့ပါဘူး။ အဖျားပိုင်းမှာပဲ ဆေးထိုးထားတဲ့ အရည်တွေ စုနေတယ်နဲ့တူတယ် အဖျားပိုင်းမှာ ကြီးနေတယ်။ ထပ်ဖျားကို အောက်ဆွဲချလို့ မရဘူး။ ဆက်ဆံတာတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆီးပေါက်ရင် ဆီးကအကုန်မထွက်ပဲနဲ့ နည်းနည်းကျန်နေတယ်။ သုတ်လွှတ်ရင်လဲ ပန်းမထွက်ဘူး။ နည်းနည်းချင်း ကျတယ်။ ဒါကို ဖြတ်လိုက်ရမလား။ ဖြတ်ရင် အရင်လိုပြန်သေးသွားမလား။ ဖြတ်လည်းဖြတ်ချင်တယ်၊
• ကျွန်တော် ဆေးထိုးတာက တကြိမ်ထဲပါ။ ဘာဆေးလဲတော့ မမှတ်မိဘူး။ ထိုးတာက ယိုးဒယား (မယ်ဆိုင်) မှာပါ။ ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုတာက အရေပြားကိုပါ။ အရေပြားလှန်လို့မရရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်ထင်လို့ပါ။ အရေပြား ဖြတ်ပြီး ဆေးတွေ ခြစ်ထုတ်လိုက်ရင် အရင်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သေးသွားမှာပေါ့။ အကောင်းဆုံးကို လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
• ကျွန်တော် ဆရာ့ဆီကို တချိန်တုန်းက ရေးဖူးပါတယ်။ လိင်တံကို ဆေးထိုးထားတဲ့အကြောင်းပါ။ အခုအဲ့ဒါကို ပြန်ပြီးခွဲပစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆီးသွားတိုင်းမှာ ဆီးကျန်နေတာရယ်၊ ဆက်ဆံပြီးတိုင်း သုက်ရည်အကုန် အပြင်ကိုမရောက်တာရယ်၊ ထိပ်ဖွင့်လို့မရတာရယ်တွေကြောင့်ပါ။ သိချင်တာက ခွဲစိတ်ရင် အချိန် ဘယ်လောက်ကြာအောင် ဆေးရုံမှာနေရမှာလဲ၊ ခွဲစိတ်ပြီးရင် ဘာတွေကိုရှောင်ကြဉ်ရမှာလဲ၊ (့) မှာ သွားပြီးလုပ်မှာပါ။ ကုန်ကျစရိတ်ကော များနိုင်လား၊ အရည်ပြားကို မဖြတ်ထုတ်ပဲနဲ့ ပြန်ပြီးချုပ်လို့ရနိုင်လား၊
• အင်္ဂါကြီးအောင် ကျားအင်္ဂါထဲကို ဆီလီကွန်တို့ ပန်းပေါင်းဆီတို့အစား နောက်ပိုင်း ပင်နယ်စလင်ထိုးဆေးအဆီကို ထိုးထည့်ကြတာ သိပ်များလာပါတယ်။ (၃) ခါထိုးရပါတယ်။ ပင်နင်စလင်အဆီက ခဲနေရင် မီးဝန်းလိုက်ပါသေးတယ်။ ပထမတစ်ခါထိုးပြီး အသားနုလေးတစ်လွာ တက်လာအောင်စောင့်ပြီးမှ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ထိုးရပါတယ်။ တတိယအကြိမ် ထိုးပြီးရင် ဆေးအောင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပင်နင်စလင် ဆေးက ကျားအဂ်ါအထဲသို့ ရောက်လျင် ပန်းပေါင်းလိုမဟုတ်ဘဲ့ အသားဆဲလ်တွေပြန်ဖြစ်သွားပြီး သူကအထဲမှာ ဘာမှဒုက္ခမပေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဟုတ်ပါသလား။ ကျားအင်္ဂါကြီးချင်လို့ ပင်နင်စလင်အဆီကို တော်တော်များများ ထိုးနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဆရာ။ ဘာအန္တရာယ်မှမရှိတာ သေချာလားဆရာ သိချင်ပါတယ်။ (စာတပုဒ်ရေးထားပါတယ်။)
• ကျွန်တော့်အသက် ၂၅ နှစ်ပါ။့့ လို့ခေါ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မှာနေပါတယ်။ နားနဲ့မနာ ဖုဝါးနဲ့နာပေးပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ လိင်တံကို 1.1.2014 နေ့က ထိုင်းအုန်းဆီထိုးခဲ့မိပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ဗျာ အုန်းဆီက အသားကို ကြိတ်ထားတဲ့ အဆီမဟုတ်ပဲ အခွံကိုကြိတ်ထားတဲ့အဆီ ဖြစ်နေတယ်။ ဆယ်ရက်လောက်ကြာတော့ ရောင်လာတယ်။ 18.1.2014 နေ့က ဆေးရုံမှာပြတယ်။ ဆေးရုံရောက်တော့ မေးခိုင်ပိုးစားတယ်ဆိုပြီး အရေခွံတွေ လှန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အဖျားမှာတော့ လက်တစ်လုံးလောက် ကျန်ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါ အရေခွံပြန်ဖြစ်နိုင်လား။ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာ လမ်းညွှန်ပါဦးဆရာ။
ကဲဘယ်လိုလဲ ဘော်ဒါဘောကျွတ်တွေ….ကြီးသည် ငယ်သည် ပျိုမသိ ကြာကြာထိမှချစ်မိသည်ဆိုသောစကားလို ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ ပါတနာကျေနပ်အောင်ပြုစုပေးနိုင်ဖို့အရေးပိုကြီးသည်လို့ မစဉ်းစားမိကြဘူးလားဗျ။
ကျန်းမာသန်စွမ်းသော ယောက်ျားပီသသောသူများ ဖြစ်ကြရင် မွေးရာပါပစ္စည်းကို လိုသလိုသုံးနိုင်ကြပြီး ကျေနပ်စေနိုင်တာပဲလေ။ ဗလမောင်တွေမှာ ကိုယ်ခန္ဓာကြွက်သားတွေက လေ့ကျင့်မှု ကြောင့်ကြီးထွားလာပေမယ့် ငယ်ပါကတော့ မွေးရာပါအရွယ်အတိုင်းမို့ သေးသွားသယောင်ထင်ရတာကလည်း ချွင်းချက်ရှိသေးသနော်။
Alex Aung (6 July 2015)
Posted by Alex Aung at 9:54 AM No comments: